Ukuqedwa kwe-Ultrasonic kwama-Solid kuma-Liquid - Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonic Ukuchithwa Kweziqu Emanzini
Ukulungiswa kwezixazululo kuyisinyathelo esibalulekile samasampula webhu kanye nokukhiqizwa kwezimboni. Ngokuvamile, amasampula omabhalane kufanele athengiswe ngaphambi kokuhlaziywa. I-homogenization ye-ultrasonic nokuqedwa kuyindlela esheshayo futhi enokwethenjelwa yokulungisa amasampula azo zonke izinhlobo. Ekukhiqizeni kwezezimboni, ukulungiswa kwezixazululo eziqhamukayo kanye nezixazululo ezivame kakhulu kuyisici esibalulekile ekuqinisekiseni izici zomkhiqizo eziqinisekisiwe kanye nekhwalithi eqhubekayo. I-dissolvers ye-ultrasonic iyatholakala njengamadivayisi we-compact lab futhi njengama-dissolvers e-industrial-full commercial.
I-Ultrasonics iyithuluzi eyaziwa, elithembekile le-sampula yokulungiselela ebhodini. Izinhlelo zokusebenza zifaka phakathi i-homogenization, emulsification, ukuhlakazeka, Ukukhipha, i-degassing, futhi sonochemical ukwelapha.
Ukulinganisa ngamathuluzi wokuhlaziya (isb. HPLC, i-spectrometer ye-athomu, njll.), Ngokuvamile amasampula amaningi kufanele aphucwe. Lokhu kusho ukuthi isampula kumele ibe sesimo esihambisanayo nesisombululo noma kufanele sidluliselwe ku-colloid, ukumiswa, ukusabalalisa noma umxube uma umxube unobungozi obuhlukile. I-ultrasonication enamandla iyithuluzi eliphumelelayo kakhulu ukulungiselela kokubili izingxube ze-homogenous ne-heterogeneous. Uma ngabe unesithakazelo ekulungiseleleni ukumiswa okungafani, chofoza lapha ukuze usize i-ultrasonically emulsification futhi Ukuhlakazeka!
Ukuze isizukulwane semikhiqizo ehlanganiswa ngokuqedwa kwe-ultrasonic, sicela uqhubeke ufunda ngezansi!
Ukuqeda amandla kungenye yamandla amaningi okusetshenziswa kwe-ultrasonication. Le vidiyo ikhombisa ukuqedwa okusheshayo kweJellybabies emanzini kusetshenziswa iHielscher UP200St.
Ukuqunjelwa kweJellybabies emanzini kusetshenziswa i-UP200St
I-Ultrasonic Cavitation Yokuqeda
Uma isampula i-soluble, i-solute (njenge-sucralose, usawoti, isb in powder noma ifomu lethebhulethi) ingaqedwa enqumeni (isb. Amanzi, ama-solvents aqueous, i-solvents ephilayo njll) eholela enxenyeni ehambisanayo, eyakhiwe eyodwa kuphela isigaba. Inqubo yokuqothula ingenziwa nge-manual noma mechanical stimulation, okuyinto isikhathi esiningi futhi engasebenzi. Izinkinga ezihlobene ukulahlekelwa isampula ngenxa yokuxhashazwa noma ukulahlekelwa ukukhiqizwa kabusha ngamaphutha okungahleliwe nokuxuba okungalingani.
Idivayisi ye-ultrasonic engu-200W UP200St iyinhlangano yokusebenza enamandla futhi enamandla kakhulu yamabhrikhi nemikhiqizo encane.
I-ultrasonication ivame ukusetshenziselwa ukukhuthaza ukuchithwa okuphumelelayo nokushesha kwamasampuli. I-ultrasonically yasiza ukuchithwa isekelwe ukuqhuma komshini wemiphumela yokucabangela ebangelwa ukufakelwa kwamagagasi e-ultrasound zibe yiziqu. Ukufakelwa kwamandla we-ultrasound kusiza futhi kuphuthumise isampuli esandulela ukuxilongwa okufana nokuqhaqhaza kanye nokuqeda i-leaching ngaphambi kokuhlaziywa.
Nge-ultrasonically ukulungiselela ukulungiswa kwesisombululo, kuba lula ukuxazulisa ukuxazululwa kwemikhakha ephakeme futhi ukudala ngendlela efanele futhi ngokusheshisa isisombululo esiphezulu noma esiphelele (nesiphezulu).
Uma amandla amakhulu / imvamisa ephansi i-ultrasound engenisa emkhatsini wamanzi, umswakama we-acoustic ophumela kudala izimo ezihlukile. I-Ultrasonication ithuthukise uketshezi olusetshenzisiwe oluswaketshezi olusetshenziselwa uketshezi olusetshenziselwa uketshezi olusetshenzisiwe (isib. Ukugaya, ukusungula kanye nokukhipha), okusetshenziselwa ukusetshenziswa ngaphambi kokuthola ukuhlaziya nokulinganisa.
Ukuqeda amandla kungenye yamandla amaningi okusetshenziswa kwe-ultrasonication. Le vidiyo ikhombisa ukuncibilika okusheshayo kwebhele elimnyama emanzini kusetshenziswa iHielscher UP200St.
Ukuqeda i-Gummy Bear emanzini usebenzisa i-UP200St
Izinga lokususwa liqinisekisa ijubane lenqubo yokuqedwa. Isilinganiso sokususwa sithonywa yizinto ezihlukahlukene:
impahla: i-solvent ne-solute
ukushisa + ukucindezela
i-degree of (under-) saturation
ukusebenza kahle kanye nomthelela wokuqedwa nokuxuba
ukutholakala kwama-inhibitors (isib. izinto ezifakwe kwizinhlayiya / ukuvimbela emngceleni wesigaba)
Ukuze kuphuthumise inqubo yokuxazulula izinkinga kanye nesilinganiso sokususwa, i-homogenizers enamandla enika impembelelo eyanele yemishini kuyadingeka. Amandla okuqothula nokuxuba ama-homogenizers e-ultrasonic ayaziwa futhi ngaleyo ndlela ithuluzi elivamile nelithembekile le-sampula yokulungiselela ema laboratories.
Ukuqeda amandla kuyisicelo esivamile se-ultrasonication. Le vidiyo ikhombisa ukuqedwa okusheshayo kwamakhristalu kashukela emanzini kusetshenziswa iHielscher UP200St.
Ukuqumba Amakristalu Ushukela Emanzini usebenzisa i-UP200St
Idivayisi ye-ultrasonic I-VialTweeter ivumela ukulungiselela isampuli esisodwa ngesikhathi esisodwa.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic yamasampuli webhu
Ukususwa kwe-ultrasonically kwasampula ukulungiselela kusetshenziselwa laboratories ngaphambi kwezilinganiso zokuhlaziya.
Uhlu lwezixhobo zokuhlaziya ezidinga (kaningi) amasampuli aphefumulayo:
HPLC – I-High Performance Liquid Chromatography
FTIR – I-Fourier Transform Spectroscopy engathintekile
I-GC – I-gas Chromatography
I-ATR – Icatshangelwe Ukucabanga Okuphelele
I-Laser Diffraction Particle Sizing
Ukusakaza Ukukhanya KwamaDynamic
With the ultrasonic isampula ukulungiselela idivayisi SonoStep, pre-analysis isampula ukwelashwa kungenziwa asebenze inline ngokuphelele: I ultrasonic isampula ukulungiselela idivayisi zihlanganisa stirrer edidiyelwe kanye ipompo, ukuze amasampula ugijime ngokuqinile futhi njalo ngokusebenzisa uhlelo evaliwe. Ngenxa yalokho, indodana sonication futhi enokwethenjelwa igodliwe ngaphandle ingozi ukungcoliswa cross kanye nesampula falsification noma isampula ukulahlekelwa.
I-Ultrasonic Ichitha Ukukhiqizwa Kwezimboni
Emigqeni yokukhiqiza yezimboni, amandla amakhulu e-ultrasound ahlanganiswe ekuqothuleni nasekuhlaleni i-homogenize mix mix-liquid ukudala umkhiqizo ngisho futhi ozinzile.
Thola ngezansi ezinye zezibonelo zamagatsha ahlukene ezimboni:
Imbonini yezokwelapha: Ukuchithwa kwezingxenye zezidakamizwa, isib. usawoti, ama-polymers
Isimboni sokudla nesiphuzo: Ukuqedwa kwezithako, isib. ushukela, usawoti, isiraphu, ama-condiments
upende & ezinengilazi: Ukuqedwa kwama polymers
I-Chemistry: Ukulungiswa kwesisombululo se-supersaturated ngaphambili Ukwehliswa
zezimboni processor ultrasonic UIP16000 (16kW) for streams high
Welna, Maja; Szymczycha-Madeja, Anna; I-Pohl, i-Pawel: Ikhwalithi ye-Trace Element Analysis: Izinyathelo Zokulungiselela Izampula. Ku: InTechOpen.
I-Castro, Luque de; I-Capote, Priego F. (ed.) (2007): Izicelo ze-Analytical ze-Ultrasound. I-Elservier Science, 2007.
Ukulungiswa kwe-Ultrasonic ye-Brines
Ukwehlukaniswa kwe-Ultrasonic: Amanzi, Ukuqunjelwa, Ukusabalalisa
Inqubo ye-Ultrasonic Precipitation
I-Ultrasonically Ihlelwe i-Famotidine Solid-Lipid Nanoparticles
Kuthuthukisiwe Remdesivir Solubility ngu Sonication